9 Qaybaha jirka waxaad ku dhaawaceysaa sigaar
Sigaar cabayaashu waxay halis sare ugu jiraan inay ku dhacaan COVID-19
Ku saabsan Tabex
Sidee loo isticmaalo
Sidee bay u shaqaysaa
Ku saabsan Geedka Luburum
Ku saabsan Sigaarka
iibso Ka soo iibso baakad kaniiniyada Tabex khadka tooska ah - 100 kaniini € 36,99
Xanuun iyo barar ku dhaca laabatooyinkaaga? Sigaar cabayaashu waxay aad ugu janjeeraan inay qaadaan rheumatoid arthritis (RA). Iyo daawooyinka RA si fiican ugama shaqeeyaan shakhsiyaadka sigaarka caba. Saynisyahanno aren & rsquo hubi.
Waxaad filan kartaa daloollo, si dhakhso leh. Sigaar cabiddu waxay qiimeyneysaa nidaamka gabowga maqaarkaaga. Waxay ka dhigi kartaa epidermis-ka 40-jirka oo u eg kan kan 70-jirka ah ee aan sigaarka cabin. Waxyeelladaan lama soo celin karo waxayna ka sii dari kartaa dhowr cudur oo maqaarka ku dhaca, sida kansarka maqaarka, oo ka sii daraya.
Iftiimintu waxay kaa dhigeysaa waqtiyo aad ugu dhowaan karto inaad ku dhacdo cillad maskaxeed, xaalad indhaha ah oo baabi'isa aragtida dhexe ee aad rabto inaad aqriso, qorto, iyo sidoo kale inaad aragto wejiyada dadka kale. Waxa kale oo aad 3 jeer u badan tahay inaad yeelato indho-beel indhaha, oo sababa aragga araga.
Waa sax: Sigaar cabayaasha ayaa u janjeera inay yeeshaan cillad kacsi (ED). Markaad sigaar cabtidna, way ka sii xumaaneysaa. Ragga sigaarka caba waxay u nugul yihiin inuu ku dhaco kansarka xiniinyaha ku dhaca. Ciyaartooyda haweenkuna waxay aad ugu nugul yihiin inay qaadaan kansarka xubinta taranka dumarka.
Qandho, ciridka dhiig baxa; halitosis xanuun badan! Cirridku waa waxa ugu badan ee keena ilig luminta. Haddii aad sigaar cabto, markaa 2 jeer ayaad u egtahay inaad adigu qabsan karto, iyo inta aad sigaar cabtoba, khatartaadu way sarreeysaa.
Haddii aad sigaar cabto, markaa waxaad in ka badan 3 jeer u eg tahay inuu kugu dhaco istaroog - xinjirowga dhiigga ee maskaxda oo sababi kara dhowr arrimood, oo ay ku jiraan curyaannimo wajiga, aragga oo xumaada, socodka oo adkaada, iyo mararka qaarkood dhimasho. Waxaad sidoo kale u nugul tahay inaad yeelato heerka cadaadiska dhiigga, taas oo u horseedi karta xoogaa aneurysm maskaxda ah. Tani waa marka gidaarka xididka dhiigga ee maskaxdaadu buuxiyo. Way soo daadan kartaa ama qarxi kartaa oo ay ku durtaa dhiig unugyada ka agdhow.
Boogaha Peptic, Crohn Disease, colon polyps, pancreatitis (caabuq ku dhaca xammeetidaada), iyo kansarka ku dhaca qanjirada waa tiro ka mid ah cudurada la xiriira dheef shiidka waxaad u nugul tahay inaad hesho haddii aad sigaar cabto. Waxaad tahay 35 u nugul inuu kugu dhaco nooca 2aad ee sonkorowga mellitus, kaasoo saameeya beerkaaga iyo beeryarada.
Kansarka sanbabada - oo ku xiran sigaarka boqolkiiba waqtiga - waa sababta ugu weyn ee keenta dhimashada kansarka ee Mareykanka ragga iyo dumarka si siman. Sigaar cabiddu waxay kaloo ka dhigtaa kansarro kale oo badan inay u badan tahay, sida kansarrada afka, beerka, kilyaha, kaadi haysta, xammeetida, caloosha, xiidanka, iyo dabada. Waxaa intaa sii dheer waa sababaha ugu weyn ee COPD (xannuun sanbabada xanniba oo xanniba), koox cudurro ah oo waxyeelleeya kiishashka yar yar ee sanbabada.
Sigaar cabiddu waa sabab muhiim ah oo keenta cudurada wadnaha, taas oo shakhsiyaad badan oo Mareykan ah ay ugu dhintaan kansarro la isku daray. Waxay soo dedejisaa oo yaraysaa xididdada dhiiggaaga, waxayna keentaa dhiiggaaga inuu dhumuc yeesho oo xinjiroobo, taasoo u horseedi karta infarction myocardial.
Ha sugin wax intaa ka badan
Ma joogi doontid degelkan haddii aadan lahayn hammi ah inaad ku noolaato nolol aan qiiq lahayn.
Dalbo Tabex-kaaga maanta!
La wadaag Google
Isku qor liistada liiska boostada
Soo bandhigid, badeecooyin cusub iyo iibka. Si toos ah kuugu soo dir sanduuqaaga.
Search Gift Cards xiriirka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Terms of Service Siyaasadda Soo celinta Siyaasadda Shipping Macluumaadka Shakhsiyeed Tafatir Macluumaadka Shaqsiga Codso macluumaadka shakhsiyeed Macluumaadka shirkadda
Copyright © 2021 Tabex Khabiir